Ọkụ na-ere ọkụ - Okwu Ugbu a
Ọkụ na-ere ọkụ
Ihe na February 25, 2022 February 26, 2022 by Mark
EBE AHỤ bụ agha nke ukwuu. Agha dị n'etiti mba, agha n'etiti ndị agbata obi, agha n'etiti enyi, agha n'etiti ezinụlọ, agha n'etiti di na nwunye. Eji m n’aka na onye ọ bụla n’ime unu bụ ndị e merụrụ n’ụzọ ụfọdụ n’ihe mere n’ime afọ abụọ gara aga. Nkewa nke m na-ahụ n'etiti ndị mmadụ dị ilu na omimi. Ikekwe ọ dịghị oge ọzọ n'akụkọ ihe mere eme nke mmadụ nke okwu Jisọs metụtara ngwa ngwa nakwa n'ọ̀tụ̀tụ̀ buru ibu otú ahụ:
Ọtụtụ ndị amụma ụgha ga-ebilikwa duhie ọtụtụ ndị; n'ihi ọtutu ihe ọjọ, ihu-n'anya ọtutu madu gāju kwa oyi. (Mat 24: 11-12)
Gịnị ka Pope Pius XI ga-ekwu ugbu a?
Ma otu a, ọbụnadị n’achọghị anyị, echiche a na-ebilite n’uche ugbu a ụbọchị ndị a na-abịaru nso nke Onye-nwe-anyị buru amụma banyere ya: “Ma n’ihi na ajọọ-omume abawo ụba, afọ-ọma nke ọtụtụ ga-ajụkwa oyi” (Mat. 24:12). —Pipu PIUS XI, Miserentissimus Onye mgbapụta, Encyclical on Reparation to the Holy Heart, n. Ọnwa Iri 17, 8
Ikpe na-ere ọkụ
Maka m, ọ dịghị ihe na-egbu mgbu karịa ọnya nke ikpe na-ezighị ezi - okwu, omume na ebubo ụgha. Mgbe a na-ekwujọ anyị ma ọ bụ ndị ọzọ anyị na-akwanyere ùgwù, ikpe na-ezighị ezi ahụ pụrụ ime ka mmadụ chegharịa ma mee udo. Taa, ikpe na-ezighị ezi a na-emere ọtụtụ ndị dọkịta, ndị nọọsụ, ndị ọkà mmụta sayensị, na ee, ndị na-anya ụgbọ ala, na-agbawa obi ịhụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume ịkwụsị n’ihu ụgbọ mmiri a zuru ụwa ọnụ.
O yiri ka Jisọs ọ̀ na-ekwu na akụkụ nke ihe mere ịhụnanya nke ọtụtụ ndị na-ajụ oyi bụ mpụta nke “ọtụtụ ndị amụma ụgha.” N’ezie, Jizọs kwuru na Setan bụ “onye ụgha na nna nke ụgha.”John 8: 44 Nye ndị amụma ụgha nke oge Ya, Onye-nwe anyị kwuru:
Unu bu nke nna-unu ekwensu, unu we were obi-unu mezu ihe nile nna-unu nāchọ. (Jọn 8:44)
Taa, ọtụtụ n'ime nkewa dị n'etiti anyị bụ kpọmkwem mkpụrụ nke "ndị amụma ụgha" - ndị a na-akpọ "ndị na-enyocha eziokwu" bụ ndị na-enyocha ma na-akpụzi ihe niile anyị na-anụ, hụ na anyị kwesịrị ikwere. Ọ bụ n'ọ̀tụ̀tụ̀ buru ibu otú ahụOlu Mass Psychosis na Totalitarianism na mgbe onye ọ bụla na-ajụ ma ọ bụ na-emegide akụkọ ahụ na ihe àmà ọhụrụ, a na-akwa ha ozugbo ma na-akwa ha emo, na-achụpụ ha dị ka "ndị na-agba izu ọjọọ" na ndị nzuzu - ọbụna ndị nwere Ph.Ds N'ezie, e nwekwara ezigbo ndị na-agba izu na-emepụta echiche site na mkpa. ikuku na-akpali egwu na mgbagwoju anya. Ma n’ikpeazụ, e nwere ndị amụma ụgha bụ́ ndị na-ebuso eziokwu ndị na-adịte aka nke Okwukwe anyị agha. N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ ndị na-eyi olu akwa na akwa, na-agbasawanye nkewa ahụ ma na-emekwuwanye aghụghọ nke ndị kwesịrị ntụkwasị obi.Olu Ebe a na Ebe a
Kedu ka anyị ga-esi kwụsị agha ndị a, ma ọ dịkarịa ala, ndị anyị na-achịkwa, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume? Otu ụzọ, n'ezie, bụ itinye ndị ọzọ aka na eziokwu - na eziokwu dị ike; Jizọs sịrị: “Abụ m eziokwu”! N’agbanyeghị nke ahụ, ọbụna Jisọs jụrụ iso ndị o gburu ya bụ́ ndị na-akwa Ya emo, n’ihi na o doro anya na n’agbanyeghị ajụjụ a jụrụ ha, ha enweghị mmasị n’eziokwu kama n’ịgbachitere ọnọdụ ha—ọbụna ma a sị na ha ji obi ike mee ihe. Ka okwu ha na-esikwu ike, otú ahụ ka ha na-aghọkwu vitriolic.
Ọnwụnwa ahụ bụ ịkasi ndị ọzọ ike n’obi nkoropụ anyị, ịtụfu ihe ịchọ mma na ịtụghachi okwute a na-atụ anyị. Ma Pọl na-agwa anyị ihe ọzọ.
Enyeghachila onye ọ bula ihe ọjọ n'ọnọdu ihe ọjọ; na-echegbu onwe gị maka ihe dị mma n’anya mmadụ niile. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, n’akụkụ nke unu, unu na mmadụ niile dịrị n’udo. Ndị m hụrụ n'anya, achọla ịbọ ọ́bọ̀ kama hapụnụ ọnụma ahụ; n'ihi na edewo ya n'akwukwọ nsọ, si, Mu nwe ọ́bọ̀, Mu onwem g repnyeghachi, ka Onye-nwe-ayi kwuru. Kama, “ọ bụrụ na agụụ na-agụ onye iro gị, nye ya nri; ọ bụrụ na akpịrị na-akpọ ya nkụ, nye ya mmiri ka ọ drinkụọ; n'ihi na site n'ime otú ahụ, ị ​​ga-ekpokwasị icheku ọkụ n'isi ya. ” Ekwela ka ihe ọjọ merie gi kama jiri ezi ihe merie ihe ojoo. (Rom 12: 17-21)
The icheku ịhụnanya. Gịnị mere nke a ji dị ike? N'ihi na Chineke bụ ịhụnanya.1 John 4: 8 Ọ bụ ya mere “ịhụnanya adịghị ada ada.”1 Cor 13: 8 Ugbu a nke ahụ nwere ike ọ gaghị eme ka ndị enyi gị kwenye ma ọ bụ ndị ezinụlọ gị arụmụka. Ma ihe ọ na-eme bụ ịwụpụ otu adịghị emebi emebi mkpụrụ n'elu oyi na obi mechiri emechi - mkpụrụ nke nwere ike ịgbaze obi onye ọzọ ka oge na-aga na ịchọta ebe ọ ga-esi eto. N'ebe a, anyị ga-eṅomi omume nke ezi ndị amụma bụ ndị kwesịrị ntụkwasị obi - ma ọ bụghị mgbe nile na-aga nke ọma.
Ụmụnna m, unu emela mkpesa banyere ibe unu, ka e wee ghara ikpe unu ikpe. Le, Onye-ikpe nēguzo n'iru ọnu-uzọ-ama; Were dị ka ihe atụ nke ihe isi ike na ntachi obi, ụmụnna, ndị amụma kwuru n'aha Jehova. N'ezie, anyị na-akpọ ndị gọziri agọzi bụ ndị tachiri obi… n'ihi Chineke nwere obi ebere, na obi-ebere. ( Jems 5:9-11 )
Olee otú ndị amụma ahụ si nwee ndidi? Ruo n'ókè a tụrụ ya na nkume. N’ihi ya, anyị onwe anyị kwesịkwara ịnọgide n’okpuru akụ́ mmiri nke okwu sitere n’ọnụ ndị na-ekwutọ anyị. N'ezie, nzọpụta ha nwere ike dabere na nzaghachi gị.
Mgbe ahụ Jizọs sịrị, “Nna, gbaghara ha, ha amaghị ihe ha na-eme.” dﻣ na dê dê dê dê dê dê êlê êtê sêrêrêrêrêrê onye ahêrê ihe mere Chineke otuto nwoke a. ( Luk 23:34, 47 )
Ọ dị m ka ya bụrụ na m nwere ike ịsị na abụ m ihe atụ n'akụkụ a. Kama, ana m atụba onwe m ọzọ n’ụkwụ Jizọs na-arịọ ebere Ya maka ọtụtụ oge m na-ahụbeghị n’anya dị ka ọ hụrụ anyị n’anya. Ma ọbụna ugbu a, na ọdịda nke ire m, ihe niile adịghị efu. Site na mgbaghara, ịdị umeala n'obi na ịhụnanya, anyị nwere ike imezi mmeri ekwensu pụtara ìhè enwetara site na mmejọ anyị.
…ka ịhụnanya unu nwere n’ebe ibe unu nọ dị ike, n’ihi na ịhụnanya na-ekpuchi ọtụtụ mmehie. (1 Pita 4:8)
The Great Storm nke oge anyị ka malitere na. Ọgba aghara, egwu na nkewa ga-amụba naanị. Dịka ndị-agha nke Kraịst na nwanyị anyị nwanyị, anyị ga-akwadorịrị onwe anyị itinye ndị niile anyị na-ezute na icheku ịhụnanya na-ere ọkụ ka ha wee zute n’ime anyị obi ebere dị nsọ. Mgbe ụfọdụ, ọ na-eju anyị anya ịhụ vitriol siri ike nke onye ọzọ ozugbo. N'oge dị otú ahụ, anyị ga-ejikere n'okwu Jizọs: Nna, gbaghara ha, ha amataghị ihe ha na -eme. Mgbe ụfọdụ, dị ka Jizọs, naanị ihe anyị nwere ike ime bụ ịta ahụhụ, na jikọta ikpe na-ezighị ezi a na-ere ọkụ na Kraịst maka nzọpụta ha ma ọ bụ nke ndị ọzọ. Ma ọ bụrụ na anyị nwere ike itinye aka, ọ bụghị mgbe niile ka anyị na-ekwu, ma otú anyị si ekwu ya ga-emeri agha kachasị mkpa: nke ahụ maka mkpụrụ obi nke onye n'ihu anyị.
Ọkụ na-ere ọkụ. Ka anyị wụsa ha n'elu ụwa oyi kpọnwụrụ akpọnwụ!
Jirinụ amamihe mee ihe n'ebe ndị nọ n'èzí nọ.
na-eji ohere ahụ eme ihe.
Ka okwu-unu di kwa n'amara mb͕e nile, ka ọ nātọ nnú;
ka i wee mara otú i kwesịrị isi zaghachi onye nke ọ bụla.
(Kọl 4: 5-6)
Mass Psychosis na Totalitarianism
Ihe omuma siri ike
Ike nke ikpe
Ndapu nke Okwu Obodo
Ìgwè mmadụ Na-eto Eto
Azịza Silent ahụ
Kwado ozi oge niile Mark:
Isoro Mark banye njem The Ugbu a Okwu,
pịa na ọkọlọtọ n'okpuru iji ịdenye aha.
Agaghị ekenye onye ọ bụla email gị.
Ugbu a na Telegram. Pịa:
Soro Mark na kwa ụbọchị “ihe ịrịba ama nke oge” na MeWe:
Soro ihe odide Mark ebe a:
Gee ntị n'ihe ndị a:
Ihe odide ala
Olu Mass Psychosis na Totalitarianism
Olu Ebe a na Ebe a
Ihe na ỤLỌ, NWA na tagged ebere, mgbaghara, n'anya, ịkpọasị, nkewa, ọgụ, arụ ụka, icheku-ọku.
← Oge Wekwa ákwá
Oge awa Jona →
2	Facebook ozi
2	n'akpa uwe